Imibuzo Yokubuza Ngaphambi Kokuchitha Imali kwiNcwadi yeKhemistry
Ufumene uludwe lweencwadi zezifundo zekhosi yakho. Ngaphambi kokuba uthengise umphefumlo wakho kwi-bookstore, fumana ukuba yiyiphi imibhalo oyifunayo ngokwenene kwaye yiyiphi inqumla. Zibuze le mibuzo ebalulekileyo:
Uya kugcina le ncwadi?
Isiqwenga ngelo ncwadi uze uzibuze ukuba ingaba ungacinga ukuba le ncwadi iya kusebenza njengencwadana efanelekileyo emva kokuba ikhosi iqukunjelwe. Ukuba ewe, yithenge, ngokukhethekileyo itsha. Ukuba akunjalo, qhubeka ufunda ...
Ingaba ikhosi iyayisebenzisa itekisi?
Amazwi kwizilumko: Incwadi ingabhalwa 'njengeyimfuneko', kodwa oko akuthethi ukuba kufuneka uthenge! Ezinye zifunwa ngetekisi ngokwenene (zibuze ii-windows) okanye zihlawulwe. Ukuba awuyi kuceba ukugcina incwadi emva kweklasi, cinga ukuthenga ikopi 'esetyenziswayo.' Xa ungathandabuzeki, linda kuze kube usuku lokuqala lwenkcazo ukwenza isigqibo.
Ngaba le ncwadi yilebhu?
Iincwadi zeencwadi zeLebhu kufuneka zithengwe kwaye kufuneka zibe zintsha. Ungazami ukukrazula ebhokisini elisetyenzisiweyo. Umqeqeshi wakho akayi kuhlaziywa.
Ngaba isicatshulwa esasetyenziswayo?
Iimibhalo ezidume ngokuqhelekileyo ziyafumaneka kwifomu 'esetyenzisiweyo'. Nangona kunjalo, isicatshulwa mhlawumbi siyathandwa kuba incedo! Ukuba ufuna incwadi kwaye uya kuyisebenzisa emva kokuba ikhosi iphelile, yithenge entsha. Ukuba uxoxelwe ngenkokhelo okanye uncedo lwencwadi luyabuza, yithenge.
Ngaba le ncwadi iya kunceda?
Ngamanye amaxesha kunconywa incwadi, kodwa ayifuni.
Oku kuyinyaniso kwizifundo ezininzi zokufunda. Zibuze wena ukuba ngaba uya kuzuza ngokusebenzisa le ncwadi. Ngaba le ncwadi ingabaleka? Ingaba iluncedo ukuthenga, entsha okanye isetyenziswe? Xa ungathandabuzeki, khuluma nomqeqeshi wakho.
Nangona lo ngumbuzo omhle ukuphakamisa malunga nokuthenga iincwadi, akusiyo umbuzo onokuwubuza xa ukhetha ukuba ungayifumani incwadi okanye awufumani.
Umehluko? Ukuthenga incwadi kuquka imali. Ukufumana incwadi kunokubandakanya imali, kodwa kunokuquka ukuboleka kumfundi okanye uprofesa. Andicebisi ukuhambisa iincwadi ezibalulekileyo. Ukuba ufuna incwadi, yifumane!
Indlela yokuguqula amaxesha okushisa ukusuka eKelvin ukuya kwiCelsius
Amandla aMandla kunye noXinzelelo Umzekelo
I-pH kunye ne-pOH Yenza umsebenzi wokusebenzela
Izihloko ngokuqhelekileyo zifunyenwe kwiBanga le-11 leKhemistry
Iimpawu ze-Alchemy kunye neentsingiselo
Indlela yokwenza i-Potassium Nitrate Isixazululo
UbuGlaze Ubuciko - Ukupenda i-Glazes kwi-Oyili okanye kwi-Acrylic
ULaurie Halse Anderson, Umbhali Omdala Omdala
I-Alphabet ye-Phonetic Alphabet
ImiSebenzi yokuFunda yabaFundi beZikolo eziPhakathi
Ukudala isikrini seSplash kwizicelo zeDelphi
Iimpawu ezidumile malunga neTshintsho
Ama-Imams aseMecca: Abafundiswe kakuhle, Abanobuhle-bumnandi, nabakhulu kakhulu
Amacandelo aSebenzayo okuPhumelela kweMfundo ePhambili kwiClassi
Inkcazo, Ukubhengezwa, kunye nokubaluleka kwe-Seiyu
UbuKristu bokuqala eMntla Afrika
UWarren G. Harding - UMongameli we-29 we-United States
Umlinganiselo we-MCAT Izikolo zeZikolo zonyango ezi-11 ukuya ku-25
Iphrofayili ye-serial Rapist uDavid Parker Ray
I-sniglet (igama lokudlala)
Ziziphi Iimpawu Ezinkulu Eziyimfuyo Yokuqala?
I-Kwanzaa: 7 Imigaqo yokuHlonipha iGugu le-Afrika